Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Houssem Aouar Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Houssem Aouar na-egosiputa Eziokwu banyere Akụkọ nwata ya, Nko mbido ya, ezi na ulo ya, ndi nne na nna, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, ibi ndu, ndu onwe onye na uru ya.
N’okwu ndị dị mfe, nke a bụ akụkọ gbasara Ndụ Ndụ Onye bọọlụ. Ọ na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, lelee oge ọ bụ nwata ka ọ gaa na ngosi ihe osise - nchịkọta zuru oke nke Houssem Aouar's Bio.
Ee, mụ na gị maara na ọ bụ nsi na ntụ na teknụzụ pụtara ìhè Hakim Ziyech. Ka a sịkwa ihe mere, Hansi Flick nwere ịhụnanya ma gbalịa ime ka ndị otu FC Bayern Munich na Houssem Aouar sikwuo ike. N'agbanyeghị nkwado ahụ, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ ya zuru ezu. Enweghị oge ọzọ, hapụ ka ịmalite.
Houssem Aouar Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha "Houss." A mụrụ Houssem Aouar na 30th nke June 1998 na nne na nna North Africa, na Lyon, isi obodo na France Auvergne-Rhône-Alpes France.
Obi abụọ adịghị ya, mama Houssem Aouar emerụọla iwu nke ịka nká n'ihi na ọ dị ka onye na-eto eto n'agbanyeghị na ọ nọ na ngwụcha 40s. Ọ bụ ezie na ndị ịgba ọsọ ụkwụ egosighi papa ya n'ihu ọha, Lifebogger nwere obi ụtọ maka ihe. Iji mee ka ị hụperetụ otu nne na nna ya mara mma ile anya bụ onye ọ kacha hụ n'anya.
Na-eto eto na Lyon:
N'ịbụ onye a zụlitere na mpaghara nke abụọ kachasị na France, anyị maara Aouar inwe mbido dị ala. N'oge ahụ, ọ na-enwe oge iso ụmụaka ndị ọzọ na-adịghị elebara esemokwu agbụrụ ha anya.
Site na mmalite, Houssem kwenyere na ya nwere ike ịrụzu nnukwu ihe na football. Nke a bụ n'ihi nrọ nkịtị ndị otu ya na-ahụ. N'ikwu okwu banyere nrọ nwata, nke na-anọgideghị na-efu efu, onye na-egwu egwuregwu gwara ndị nta akụkọ French otu oge.
“Mụ na ụmụaka ndị ọzọ na-esobu emekọ ihe ọnụ na Lyon. Footballgba bọọlụ ghọrọ agụụ nke anyị niile nwekọrọ ọnụ. O mere ka anyị dị n’otu n’otu n’agbanyeghị ihe dị iche n’ezinụlọ na mba si.
Ruo oge, anyị ka na-abụ ọbụbụenyi anyị. Ọ bụ ihe atụ zuru oke nke agbataobi ebe ndị mụrụ m zụlitere m. Karịsịa, ịdị n'otu ghọrọ otu n'ime ike anyị. ”
Houssem Aoua Ezigbo Ezinụlọ:
Eziokwu ahụ bụ na nne ya rụrụ ọrụ dịka nọọsụ a ma ama na-egosi na nwa anyị enweghị nsogbu n'oge ọ bụ nwata. Onye na-egwu egwuregwu ahụ tolitere na nzụlite ezinụlọ nke etiti na enweghị akwụkwọ akụkọ gbasara nwata. N'ihi ụgwọ ọrụ nke nne na nna Houssem Aouar, ezinụlọ ya dum biri ma nwee nkasi obi dịka ụmụ amaala karịa.
Houssem Aouar Ezinụlọ:
Iji mara agbụrụ nna ya, ị ga-ebu ụzọ mụta ịkpọ aha ya, nke na-ekwu ọtụtụ ihe banyere agbụrụ Algeria. Obi dị m ụtọ, Ebumnuche akọwaala otu esi akpọ aha Houssem Aouar nke ọma.
Mgbe ị nụrụ na mbido ya bụ Algeria, ị nwere ike ịmalite iche echiche… Ndi Aouar si n'usoro akụkọ ọdịnala dịka Zidine Zidane, onye ọ na-esetịpụ ihe nlereanya ya ugbu a?
Obi abụọ adịghị ya, Algeria nwere ọtụtụ olumba dị iche iche dị ka a hụrụ na maapụ asụsụ ha n'okpuru. Na-eche na nne na nna Houssem Aouar zụlitere ya na mba North Africa, ọ ga-abụ na ọ mụtara ịsụ ụdị olumba dị iche iche, ọkachasị asụsụ ndị Sahara Arabic nke Algeria.
Houssem Aouar Football Akụkọ:
Ọ bụụrụ ndị mụrụ ya amamihe dị ukwuu iji tụlee ịtọ ya ụzọ na bọl - naanị ihe ọ hụrụ n'anya dịka nwatakịrị. N'ihe ndekọ a, nne Aouar mere ka ọ sonye na ụlọ akwụkwọ mmuta nke AC Villeurbanne mgbe ọ na-ele 8.
Careermalite ọrụ ntorobịa ya na agụmakwụkwọ abụghị nnukwu nsogbu. Ọbụna ihe ndị ọzọ Algeria-French kwabatara - (dị ka Nabil Fekir) - ịchọta ọ dị mma ịmalite njem njem bọọlụ ha ebe ahụ.
N'oge ahụ, Aouar nwere nchegbu karị banyere ime ka ndị mụrụ ya nwee mpako site n'ịrụ ọrụ dị mma karịa ụmụaka ndị ọzọ na agụmakwụkwọ. N'ezie, ọ bụghị naanị ndị ezinụlọ ya ka nwatakịrị ahụ nwere obi ụtọ kama ọ tụkwara ndị nkụzi ya n'oge ọ someụ. Oge ya kachasị echefu echefu na AC Villeurbanne na-anọgide na-enyere ndị otu aka iji merie otu n'ime trophies ama ama nke agụmakwụkwọ.
Njem nke Olympique Lyonnais:
Site na enyemaka Adidas mgbe niile, onye na-eto eto na-abịanụ enweghị nsogbu na-akwado ngwa ndị ọ chọrọ. Mgbe afọ atọ nke ịzụlite talent ya na Villeurbanne, Aouar gwara ndị otu egwuregwu ya ka ha nọrọ nke ọma. Ọ gara iso na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Olympique Lyonnais na 2009.
O doro anya na ndị mụrụ ya nwere ọtụtụ nrụgide tupu afọ iri na otu ahụ abanye na nnukwu ụlọ nke Lyon. N'inwe ike ịnweta ụlọ ọrụ ndị ka elu na agụmakwụkwọ ọhụrụ ya, Aouar rụrụ ọrụ iji mezue flair na teknụzụ ya na dribbling. Site n'ịrụsi ọrụ ike na nduzi ka mma site na ndị nkuzi ya, onyinye ahụ bara ụba karịrị ndị ọgbọ ya.
Houssem Aouar Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Dị ka ha mere Corentin Tolisso. na pitch, mba ya sitere na ezinụlọ (Algeria) hapụrụ na egbe na-ezighi ezi nke egbe.
Ịgbaso nzọụkwụ nke Kylian Mbappe, Aouar tụgharịrị uche ya na-egwu maka France kama Algeria. Mkpebi ya welitere ọtụtụ ajụjụ n'etiti ndị nyocha egwuregwu na-echegbu onwe ya banyere nnukwu ike XI nke ndi klas nke uwa (tinyere Aouar) nke obodo ugwu-Africa tufuo.
Ka m na ede Bio a, obuna French Karim Benzema gbalịrị ime ka talent ahụ bara ụba sonyere ndị otu mba Algeria. Ọzọkwa, onye njikwa Desert Foxes, Djamel Belmadi mere ka ndị nne na nna Houssem Aouar kwenye ịgwa ya ka ọ gosi Algeria. Agbanyeghị, Houss ka na-arapara na otu ndị France.
Ihe omuma nke Houssem Aouar - Akụkọ nke oma:
Mgbe ọ rịgoro n'eluigwe na Ligue 1, onye na-agba egbe Finesse maara na njem ịda mba amalitela. Ọ bụ ịdị umeala n'obi na nraranye nyeere Aouar aka ịbụ onye ọkpụkpọ egwu na ngwa agha Lyon. Nkà na ụzụ ya na mkparịta ụka ya mere ka ọ bụrụ onye na-enweghị atụ nke na-enye Depf Depad na Memphis nke zuru oke iji nweta goolu.
Ka Aouar gara n'ihu na-ahapụ ndị Fans na ụjọ maka ikike ya, ọtụtụ klọb rịọrọ maka mbinye aka ya. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Arsenal bịanyere aka na ya na oge mgbanwe 2020/2021 mana ọ gara Thomas Partey - naanị maka klọb ahụ malitere ịkwa ụta maka mkpebi ha. Na mmegwara, onye na-egwu egwuregwu ahụ jụrụ ịrịọ arịrịọ Arsenal - na nhụsianya ka ọ na-achịkwa ịhapụ Lyon maka ndị Gunners na Jenụwarị 2021.
Ikekwe ị naghị elebara ụdị egwuregwu ọ na-egwu anya. Ọ bụ ya mere anyị ji kwadebe ihe osise dị n'okpuru ebe a na-egosi oke ịgba bọl na-enweghị atụ na ihe kpatara ya Mikel Arteta ga-ahụ ya n'anya ruo mgbe ebighị ebi.
N'ezie, Aouar na Riyad Mahrez ga - eme FIFA njikọta ọbara n’egwuregwu vidio kachasị amasị gị - PS5. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu banyere Biography, bụ akụkọ ihe mere eme.
Onye bu Houssem Aouar Girlfriend na nwunye ya ibu?
Maka inwe ihe ịga nke ọma ma na-ebili na nnukwu ọchịchọ nke French football, ọtụtụ fans ga-ajụ ma ọ bụrụ na e nwere ndị inyom n'azụ obi ya dị nwayọọ. N'ezie, mma ya mara mma ga-eme ka ọ dị elu maka enyi nwoke nwanyị.
Ka m na-ede Bio a, Aouar emechila ntị iji jụọ ma ọ nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye dị ya nso. Anyị na-eche na ọmarịcha midfielder nwere ike ịbụ mmekọrịta mana ọ jụrụ ịme ya n'ihu ọha, ọbụlagodi ugbu a.
Houssem Aouar Ndụ Nke Onwe:
Youtụleela ihe na-eme agbachitere Champions League pụrụ iche? Iji gwa gị eziokwu, Aouar nwere ntụkwasị obi, nchedo ma na-echekwa echiche, ọ bụ ya mere ọ ji dị mfe ịnweta ntụkwasị obi ndị mmadụ.
N'èzí olulu ahụ, ọ na-edebe ndụ dị jụụ nke na-enweghị ọtụtụ ọgba aghara gụnyere ihe ọ bụla nke na-etinye ahụike ya. Ihe anyị na-ahụ ka ọ na-eme n'ọhịa nwere ike ịbụ ngwaahịa nke echiche ya nke ọma n'akụkụ osimiri na ụsọ mmiri mgbe ọ na-adịghị onye na-ele ya.
Dị ka Benrahma kwuru, Houss nwere mmasị ka ekwenye site n'ụzọ ọ na-eji ejiji. O doro anya, ụgwọ nnukwu ụgwọ ya nke million 1.5 (2020 Stats) nwere ike inye ya nnukwu ụlọ, uwe mara mma na akpụkpọ ụkwụ na ụgbọala. Agbanyeghị, ndị na - agba bọọlụ na - ahọrọ ibi ndụ ole na ole.
Ka m na-achikọta Life Life Story, Aouar na nne ya biri ma nọrọ ọtụtụ oge ezumike ya na-ajụ oyi na mpaghara Lyon ya. N'okwu ya;
“Mụ na nne m ka bi. Eziokwu bụ, Ọ meela ihe niile maka m ma enwere m obi ụtọ na ebe ọ dị. N'ezie, ọ na-ewetara m nhazi.
Egwuru egwu n'egwuregwu buru ibu ma laghachi ebe o mechara na-eme ka m nwee ike ịdakwasị ụkwụ m n'ala-nke ahụ dị mkpa. Ana m enye ndị ezinụlọ m ọtụtụ ihe. ”
Houssem Aouar Ndụ Ezinụlọ:
Uslọ emeela ka anyị kwenye n'eziokwu ahụ bụ na ihe na-eme ka mmadụ nọrọ n'ụlọ abụghị ebe ha bi kama ọ bụ ndị gbara ha gburugburu. N'eziokwu, ndị na - agba ọsọ bọọlụ na - enwe afọ ojuju oge ọ bụla ndị ezinụlọ ya mere ọfụma. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị eziokwu banyere nna Houssem Aouar na nne ya na ụmụnne ya n'akụkụ a nke Bio ya.
Banyere mama Houssem Aouar:
Ezigbo nne na-emepụta ụmụ amaala na-aga nke ọma na nne Houss abụghị otu. Ebe ọ bụ na ọ bụ obere nwa, nwanyị ahụ hụrụ ya n'anya ma were nwata ahụ dịka akwa na-emebi emebi. Iji nyere nwa ya nwoke aka ịgba bọl, nne Aouar aghaghị ịmụ banyere uru na ọghọm nke egwuregwu ahụ.
N'echiche ya, ọ dị mkpa ijikere inye nwa ya ndụmọdụ kachasị mma mgbe ọ bụla nsogbu egwuregwu bịara bụrụ ihe na-adịghị mma. Mgbe ọ na-enyocha ọganihu nke Aouar, nne ya so ya na 2018 Ballon d'Or. Nye gaara echetụ n'echiche na ịhụnanya nne nwere ike ịkpali ya ịmụ banyere bọl n'agbanyeghị na ọ bụ nọọsụ?
Banyere Nna Houssem Aouar:
Ọ bụ otu onye na-amaghị aha ya tupu nwa ya nwoke ebili. N'ezie, papa Aouar ga-arụ ọrụ dị mkpa na nzụlite ya. Gị nwunye ya na-eme karịa. nna dị mpako ka bụ onye na-akpọtụrụ nwa ya ọ hụrụ n'anya mgbe ọ bụla ihe adịghị mma.
Banyere ụmụnne nwanne Houssem Aouar:
Dịka ọ na-agbachi nkịtị gbasara nna ya, otu a ka a na-ajụkwa ịdị adị nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwanyị. Eleghi anya ndi ozo nke ezinulo ya (ma ewezuga nne ya na nne nna ya) choro ibi ndu nke onwe ha n’enweghi uche nke ndi oru nta akuko.
Banyere ndị ezinụlọ Houssem Aouar:
… Ọ bụ ezie na papa ya na-elekọta onwe ya, nna nna ya ahọrọghị ka ọ na-eme ka mmiri na mgbasa ozi. Kemgbe Houss kesara foto nke otu nne na nna ya ochie na Instagram, ọtụtụ ndị Fans toro agadi nwoke ya maka inwe onyinye dị obere maka nwa nwa.
Houssem Aouar Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Life Life of the Technical dribbler, lee ụfọdụ eziokwu ga - enyere gị aka ịmatakwu Bio ya.
Eziokwu nke 1: Ọrụ abịa nke abụọ:
Ọbụna mgbe ọ na-arụ ọrụ iji nwee ọrụ na-aga nke ọma, Aouar emeela ka anyị ghọta na ọ na-ebute ezinụlọ ya na ahụike ya ụzọ (nke mbụ) - tupu ihe ọ bụla. Oburu na imaghi, Aouar jụrụ isonye na egwuregwu na Stade de Reims n'ihi na ọ na-ewere pitch dị ka ihe dị ize ndụ maka ahụike ya.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ya tara ya ahụhụ maka omume ya, ọ gwara ndị ezinụlọ ya ka ha nwee obi ụtọ na ya n'oge ụdị nghọtahie ahụ.
Eziokwu nke 2: Rygwọ ọnwa akwụ ụgwọ na ego site na nkeji abụọ:
Kwa Afọ € 1,500,000
kwa ọnwa € 125,000
Kwa Izu € 28,802
Kwa .bọchị € 4,115
Kwa elekere € 171
Kwa Nkeji € 2.9
Kwa nke abụọ € 0.05
You maara? Average otu nwa amaala onye France ga-arụ ọrụ ihe dị ka afọ anọ na ọkara iji rite ihe Aouar na-eme n'ime otu ọnwa.
Anyị etinyela atụmatụ nke ọma gbasara ụgwọ ọnwa ya ka elekere na-akụ. Chọpụta n'onwe gị ego ole ọ kpatarala kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Houssem Aouar'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 3: Religion:
Houssem Aouar bụ akụkụ nke 5.8% nke ndị Alakụba na France nke ngụkọta nde mmadụ 3.7. Dịka onye otu Alakụba, kpakpando Lyon na-agbaso koodu ma na-eduzi okpukpe ya.
Site na arụmọrụ ya magburu onwe ya n'egwuregwu asọmpi, Aouar eguzobewo onwe ya dị ka ike dị egwu na egwuregwu kọmputa. Nwoke French ahụ nwere ụdị ikike FIFA Eduardo Camavinga.
Site na mbido, Biography nke Houssem Aouar na-akuziri anyị na mmetụta ndị ọgbọ n'oge (n'egwuregwu) bụ ụzọ kachasị mma iji tọọ ntọala ọrụ nwata. O doro anya na ọdịnihu nwa anyị nwoke gbanwere site n'ịchọ iso ndị otu enyi nwere otu ezinụlọ site n'ịgba bọọlụ.
O kwesiri ka anyi nwee ekele maka nne Houssem Aouar maka ngosi di egwu nke ihunanya nne site na njem ya a ma ama. Ichefughi nna nna ya nke keere òkè na ịzụlite nwa nwa ya.
Buru n'uche na ndị otu anyị na-agbasi mbọ ike ime ka ị nwee afọ ojuju site na akụkọ akụkọ nke akụkọ ị kacha asọpụrụ Ndị egwuregwu bọọlụ French. Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta mmejọ ọ bụla na isiokwu anyị. Ma ọ bụghị ya, kwuo okwu mgbe ị gagharịchara ngwa ngwa nke Aouar's Biography na tebụl anyị Wiki.
Aha n'uju: Houssem Aouar
aha otutu: Uslọ
Age: 22 afọ na ọnwa 7.
Ebe amụrụ onye: Lyon, France
Ezigbo Net: 2 Nde (2020 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: Million 1.5 million (2020 Ọnọdụ)
Ọkachamara: Onye egwuregwu bọọlụ (Midfielder)
Ochie: Ọdịda Algeria
Ferland Mendy Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Corentin Tolisso Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Samuel Umtiti Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Karim Benzema Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Bọchị agbanwee: Disemba 24, 2020
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 21, 2021
Bọchị agbanwee: Ọktọba 8, 2020